လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုအတွင်းရှိ ပြင်ဆင်နေသည့်ဆိုင်တွင် ဖုန်းအားသွင်းစဉ် ၀ါယ?? - Yangon Media Group
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုအတွင်းရှိ ပြင်ဆင်နေသည့်ဆိုင်တွင် ဖုန်းအားသွင်းစဉ် ၀ါယ??
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၃ ၊ ၂.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့ ည ၂၁း၃၀ နာရီအချိန်တွင် လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၆၉/အေ)ရှိ Market Place ဈေးဝယ်စင်တာ၏ ပထမထပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ လှိုင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဦးဆောင်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါနေရာ၌ အခန်း မျက်နှာကျက် များကွာကျ၍ နံရံတွင်ကာရံထားသည့် မှန်ကွဲစများလွင့်စင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ဖြစ်စဉ်အား စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်နေရာဖြစ်သည့် ဈေးဝယ်စင်တာအတွင်း ပထမထပ်ရှိ Hong Bao Dimsum Houseသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် ၀င်းနိုင်၊ ဒုတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ၀င်းမင်းသိန်း၊ အမှတ်(၉၀၅)စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ရင်းမှူးနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတို့က အခင်းဖြစ်ရပ်အား အသေးစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းဆိုင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပိတ်သိမ်း ခဲ့ပြီးနောက် လုပ်ငန်းပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ရန်အတွက် မူလအတိုင်း ပြန်လည်ပြင် ဆင်ရန် ရဲကျော်မြတ်ပါ အလုပ်သမား(၁၃)ဦးတို့မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ပြင် ဆင်နေစဉ် Extension ကြိုးခွေအား အသုံးပြု၍ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အားသွင်းနေစဉ် မီးကြိုးခွေမှ ၀ါယာရှော့ဖြစ်၍ (Spark)ရရှိပြီး အဆောက်အအုံ မျက်နှာကျက်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တန်းများသို့ ပို့လွှတ်သွယ်တန်းထားသည့် Gas ပိုက်လိုင်းမှာ Gas ယိုစိမ့်နေမှုကြောင့် ထို(Spark)မှတစ်ဆင့် မီးကူးစက်ကာ လောင်းကျွမ်း ပေါက်ကွဲခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်အရာဝထ္တု ပစ္စည်းများလည်း မတွေ့ရှိ ရသည့်အပြင် ယမ်းနံ့များလည်း ရရှိခြင်းမရှိကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်သူများ၏ စစ်ဆေးချက်အရသိရှိရသည့်အပြင် အခင်းဖြစ် အဆောက် အအုံအတွင်းရှိ မျက်နှာကျက်များတွင် ယင်းကဲ့သို့ သွယ်တန်းထားသည့် Gas ပိုက်လိုင်း များစွာရှိသော်လည်း မြေအောက်ထပ်ရှိ Gas အိုးများထားသိုသည့် မိန်းနေရာအား အချိန်မီပိတ်နိုင်ခဲ့ ၍သာ ပျက်စီးမှုနည်းပါးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းသို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ ဆိုင်အတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ကျော်စိုးမိုးပါ (၈)ဦးတို့မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင် မီးအပူလောင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာများအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူလျက် ရှိကြောင်းနှင့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချက်များအရ လှိုင်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးရုံးဝင်းအတွင်း ဦးစီးမှူး၏ကား မိုင်းခွဲခံရ
မန္တလေးမြို့တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သည့်နေရာများကို စည်ပင်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှင်းလင်းဖယ်ရ
အဖွင့်ပွဲဦးထွက်တွင် သရေရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ချဲလ်ဆီးအသင်း၏ ခြေစွမ်းအပေါ် လမ်းပတ်ကျေနပ်
ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး အသတ်ခံရမှုကို ပြန်စစ်ဆေးမည်